UBulawayo Ukhokhela Kwabathelelwa Igcikwane Lengculaza
INational AIDS Council kade isethulela intathelizindaba okumayelana ngokumemetheka kwegcikwane lengculaza.
Idolobho lakoBulawayo liyakhokhela kunani labantu abathelelwa igcikwane lengculaza lona eselikusilinganiso sokubili lengxenye ekhulwini - 2,5% - uma kuqathaniswa leselizwe esingaphansi kokukodwa ekhulwini.
Ekhuluma lentathelizindaba ngemva komhlangano oqoqwe yinhlanganiso yeCommunity Working Group on Health koBulawayo ngoMvulo, uMqondisi weNational AIDS Council eMaNdebeleni, uNkosikazi Senatra Nyathi, uthi inani leli liyabethusa okwenza bazidle ingqondo ukuba inhlelo abazenzayo kambe azifinyeleli ebantwini na?
Uthe inhlanganiso yePlan International ngakwelinye icele ibika ukuba inani labasakhulayo abatshiye isikolo liphezulu kakhulu lonyaka njengoba abafundi abedlua inkulungwane ezintathu - 3,650 abangamantombazana batshiye isikolo besiyakwenda labafana abangu 251.
Omunye walabo abethulele intathelizindaba ngegcikwane leHIV.
Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kuhlangothi lukahulumende lwezempilakahle, uMongi Khumalo, ubike ukuba lokhe beqhubekela phambili besebenza lentathelizindaba ekwethulweni kwembiko ephathelane lezempilakahle phansi kwenhlelo abalazo.
Uthe kusukela lonyaka bayabe besebenzela ezibhedlela zemaphandleni bekhuthaza abesifazane abazithweleyo ukuba bazobelethela ezibhedlela.
Inani labomama abatholakala belegcikwane labathelela ingane igcikwane liyehla kodwa uhulumende weZimbabwe ulenjongo yokubona bonke omama besiyabelethela ezibhedlela njalo behlolwa betholiswa lamaphilisi uma bethe bafumanwa belemikhuhlane.